Sein Lyan - စိ န် လျှံ: မသက်ထွေးဆီသို့ လွမ်းချင်း
Writer Sein Lyan Time 9:04 pm
သက်ထွေးဆိုတော့... သေး............ ×× ပေါ့...
အဟ... ဖြစ်တတ်ပ့ါ သူ့ ရီးစား က.။ ကျွန်တော့ကောင် မလေးလို့ တော့ လက်ယန်းယန်းပြီး စကားမပြော တာ တော်သေးတယ်လို့ ပြောရမယ်..။ ဘေးလူ ကိုဒုက္ခမရောက် စေလို့ လေ..။ အချင်း ချင်း ကတော့ ကိစ္စမရှိဘူးပေ့ါ..။
5 November 2009 at 01:48
ဖြစ်ရလေ.. ကိုဖိုးစိန်ရယ်. အတွေ့အကြုံကတော့ စံပဲ...း)
ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ သေးတပြင်းပြင်း သက်ထွေး ရယ်
မသက်ထွေး နှင့် ကိုစိန်မျောက်မျောက်
5 November 2009 at 03:14
အဲဒါပဲ ကြော်ငြာနေတာပဲ :P
လွမ်းစရာလေးတွေ ပြန်တွေးနေတယ် ပေါ့လေ...
ဖြစ်ရလေတယ် “မသက်ထွေး” ရယ်။
အရယ်သန်ရှူးထွက်တတ်တဲ့ ချစ်သူကိုမှ ရယ်စရာ ပြောတတ်တဲ့ အမောင် ဗိုလ်စိန် ငမိုက်သား
“မသက်ထွေး” ခုံရုံးသို့ သွားနေသည်။
တစ်ချိန်တုန်းကတက္ကသိုလ်ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ခုရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုကို မထင်မှတ်ဘဲ သိလိုက်ရလို့ ကျေနပ်ပါကြောင်း……….တစ်ခုထပ်ပြောလိုတာက သူ့ရဲ့မသက်ထွေးကအမှန်တကယ်ကို ချစ်စရာကောင်းတာထောက်ခံပါကြောင်း……..
နင့်ဘယ်သူကိုရေးတာလဲ..ငါသိတဲ့တစ်ယောက်တော့ မဟုတ်ဘူး..သေချာတယ်.. ဒါဆို ဘယ်သူဖြစ်မလဲ..
ခေါက်ဆွဲခြောက်လား... မဒမ် ဆိုလဲရီ လာ... ဟိဟိ
နေကောင်းအောင်နေပါ သူငယ်ချင်း.. ကြားရတာရင်မောလို့
မသက်ထွေး ချစ်ချစ်ရယ်။း))
ကိုဖိုးစိန် အီးမေးလ်ကလည်း စိန်မျောက်မျောက်ဖြစ်မယ်
ဂျပန်ကလည်း ဖြစ်မယ်ဆို ကျနော်တို့ထူးဆန်းစွာပြန်ဆုံ
ကြပြန်ပြီ မသက်ထွေးကိုတော့ နောက်သိပ်မဖက်နဲ့ပေါ့ဗျာ ဖက်ရင်လည်းမေးပြီးမှဖက်ပေါ့..
Is it real ? I don’t know.But i m sure it wasn’t me.:P
ငါမသိလိုက်တဲ့အချိန်မှာ ဘယ်ကောင်မလေးနဲ့ရည်းစားဖြစ်လိုက်သေးတာတုန်း။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတေ့ာ i m the best enemy of all of your girlfriends. ချစ်သူငယ်ချင်းကောင်းမှုနဲ့ ငါ့မှာ ခင်သူတွေပေါများလိုက်တာ မပြောပါနဲ့။ နင် အသိဆုံးနေမှာပါ။
I just remember my bro's name who's away from us now ! :(
ေ...း ထာဝရ ...က် အဟီး
စဉ်းစဉ်းစားစားရေးပါငါ့ ညီရာ မသက်ထွေး လွမ်းချင်းဆိုပြီး စာတစောင်ပေတဖွဲ့ ရေးလို့တခြားကျန်တဲ့ သူတွေ သူတို့ အကြောင်း မရေးဘူးဆိုပြီး စိတ်ဆိုးလို့စီးတဲ့ ခုံဘိနပ်နဲ့ပေါက် နီးရာဒါးဆွဲလိုက် မောင်မင်းကြီးသားကျမ္မာပါစေ အစရှိတဲ့မတော်တရော် မေတ္တာပို့နေမှဖြင့်ပြေးပေါက်မှားနေမယ် ညီလေးရေ ချစ်ခင်ချင်းများစွာဖြင့်သုဒြေ္န
လွမ်းစရာလေးကို ရယ်ရယ်မောမော ဖတ်သွားတယ်ဗျိုးးးးးးးးးးးးးး
တော်တော်ကိုဆိုးတဲ့ ကိုဖိုးစိန်ကြီး ဟီးဟီးဟီး..းP
ဟိုမှာ မသေးထွက်က.. အဲ.. ဟုတ်ပါဘူး
ဖတ်ရင်းနဲ့ မသက်ထွေးကိုပဲ သနားတယ်..
ကိုဖိုးစိတ်ကြီးဟီးဟီး ကိုတော့.. ဒန်ဒန့်ဒန်..း)
မနက်က ကိုဖိုးစိန်ဘလော့ဂ်က invited reader only ဆိုလို့ မဖတ်ရတော့ဘူးထင်နေတာ။ တော်ပါသေးရဲ့။ အဲလို မနောက်နဲ့လေ
ဒီကိုဖိုးစိန် ကတော့မလွယ်ဘူး.... မြန်မာဆန်ဆန်လေးသာ ၀တ်မလာရင်တော့ အိမ်မပြန်ရဲတော့ဘူးလား မထူးပါဘူးဆိုပြီး အဖတ်တင်အောင်လုပ်ချင်ပုံရတယ်ဗျာ...
မခင်ဦးမေပြောသလို "လူဆိုး" "လူဆိုး"